Logitech သဟဇာတ Elite ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Logitech သဟဇာတ Elite ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Logitech သဟဇာတ Elite ပြုပါ-It-အားလုံးဝေးလံခေါင်သီပိုက်ဆံမဝယ်နိုင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်. ဒါဟာအနည်းငယ်ချို့ယွင်းချက်ရှိပြီးရှိပါတယ်သောသူတို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆငျးသကျသငျသညျကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ device ကိုထက်ဝေးလံခေါင်သီကိုယ်တိုင်ကမှဖြစ်လိမ့်မည်, က PS4 နှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့.
အိမ်မှာဖျော်ဖြေရေးနှင့်ကြိုးမဲ့စပီကာကနေအလင်းအိမ်မှ, အပူထိန်းကိရိယာ, အာရုံခံကိရိယာ, နှိုးစက်နှင့်ပိုပြီး, ဒီသူတို့အားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တဝေးလံခေါင်သီဖြစ်ပါသည် - တော်တော်စျေးနှုန်း
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Logitech သဟဇာတ Elite ပြန်လည်သုံးသပ်: သင့်အိမ်ရဲ့တာဝန်ခံယူဝေးလံခေါင်ဖျားကိုအသုံးပွုဖို့မလွယ်ကူ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 4th, ဧပြီလအပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ Logitech သဟဇာတ Elite သူတို့အားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တဝေးလံခေါင်သီဖြစ်ပါသည်, တီဗီကနေ, အလင်းအိမ်မှ set-top box ကိုနှင့် console ကို, အပူထိန်းကိရိယာ, ကြိုးမဲ့စပီကာနှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက် sensor များ, ဒါကြောင့်စာရေးတံကိုထိန်းချုပ်မယ်.
Logitech မသာသင့်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိသမျှမှာ IR device ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မမြတ်သော universal ဝေးလံခေါင်သီအောင်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်တစ်ချိန်တည်းမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့ပစ္စည်းတွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ထုံးစံဝေးလံခေါင်သီလုပ်ခွင့်ပြု.
အဆိုပါသဟဇာတ Elite အကွာအဝေးပြုပါ-It-အားလုံးဝေးလံခေါင်သီ၏နောက်ဆုံးထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်, ယခုဖွင့်သင့်ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးစင်တာထက်ကျော်လွန်ပြောင်းရွှေ့နှင့်သင့်တပြင်လုံးကိုအိမျတျောကိုထိနျးခြုပျဖို့လိုလားသောထုတ်ကုန်.
လက်ျာဖို့သဟဇာတ Hub နှင့်အတူ၎င်း၏ charging dock အတွင်း Elite. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဲဒီမှာ Logitech သဟဇာတ Elite မှသုံးဒြပ်စင်. သင်ကဝေးလံခေါင်သီများ, အဗဟိုနှင့် app ကို.
ဒါဟာဒီဇိုင်းကိုအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါကိုင်ဖို့အပျြောအပါးခဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားကိုအသုံးပွုဖို့င့်သက်သာအရှိဆုံး. ပြပွဲများအတွက်ဝေးလံခေါင်သီရှိပါတယ်အသုံးပြုဖို့များအတွက်ဝေးလံခေါင်သီရှိပါတယ်, နှင့်ဤအဆုံးစွန်သောဖြစ်ပါသည်.
အားလုံးခလုတ်ရောက်ရန်လွယ်ကူသည်, နှင့်သူတို့တစ်တွေကောင်းတဲ့များ, သူတို့ကိုရန်တုံ့ပွနျမှုခံစား. ဝေးလံခေါင်ဖျားလေးလံသောဖြစ်ခြင်းမပါဘဲတစ်ဦး heft ရှိပါတယ်နှင့်ပျော့ပျောင်းသော-ချုပ်ကိုင်ထားပြန်စကိုင်ဖို့ကလွယ်ကူစေသည်. ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုတစ်ရုပ်မြင်သံကြားအဖြစ်ဝေးလံခေါင်သီကုန်ကျသလောက်များအတွက်ပေးသင့်, ဒါပေမယ့်အလားတူပမာဏကုန်ကျအခြားဖြေရှင်းနည်းများဒီအခြေခံအဆင့်တွင်ကျရှုံး.
အ Elite ရဲ့ထိပ်တတိယ devices များကိုရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက် 2.4in အရောင် touchscreen ကဖြစ်ပါတယ်, အကြိုက်ဆုံးလိုင်းများသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများရွေးချယ်ခြင်း, သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်မှချည်နှောင်မထားပါကြောင်းထုံးစံပညတ်တော်ကိုပယ် setting များအတွက်.
ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအခါမဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်ကြောင့် slots သောသို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် charging အထိုင်ရှိပါတယ်, သငျသညျဒါဆန္ဒရှိလျှင်မူကားကောင်းတစ်ဦးရက်သတ္တပတ်ကြာရှည်သို့မဟုတ်ဒါကြောင့်စွဲချက်အကြားလိမ့်မည်.
ကို set up တဲ့
အဆိုပါသဟဇာတ app ကိုစမတ်ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောဝေးလံခေါင်ဖျားတက် setting ကို, ပဲ့ထိန်းခြေလှမ်း-by-step process ကို. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဝေးလံခေါင်ဖျားတက်ချိန်ညှိခြင်းလည်းငါ universal ဝေးလံခေါင်ဖျားဖြင့်ဖြစ်ဖူးတဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်စဉ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့က Elite ကိုယ်တိုင်ကအပေါ်ပြုမိမရနိုင်.
Setup ကို Android နဲ့ iOS device ကိုလိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာ. အဆိုပါသဟဇာတ app ဟာအသုံးပြုသူအကောင့်ဖွင့်သတ်မှတ်နှင့်ထုတ်ကုန်ထည့်သွင်း. ဒါဟာအစတစ်ဝေးလံခေါင်ဖျားပေါ်မှာဂီယာကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုထိုကဲ့သို့သော "စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကို TV" အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတက် setting မှတဆင့်အသုံးပြုသူများအားလမျးညှနျ, ဂြိုဟ်တုသေတ္တာပေါ်ပြောင်းလဲမှုရုပ်သံလိုင်း, တီဗီပေါ်တွင် amp နှင့်ပြောင်းလဲမှုရုပ်ပုံ Modes သာအသုံးပြုပြီး volume adjust.
သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုသင်နှင့်အတူကတည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအဘယ်သို့သောအ, သက်ဆိုင်လျှင်မော်ဒယ်နံပါတ်ကိုအပါအဝင်. ငါကိုခြောက်ထုတ်ကုန် setup ကိုနှင့်ငါးလုပ်ငန်းများသွားကြဖို့အဆင်သင့်ရှိကြ၏အကြောင်းခုနစျပါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ.
အဆိုပါဝေးလံခေါင်သီကြိုးမဲ့ Hub ချိတ်ဆက်ပြီး, သောထို့နောက်ထုတ်ကုန်ဖို့ပညတ်တို့ကိုထပ်ဆင့်လွှင်, ဝေးလံခေါင်ဖျားအဓိပ္ပာယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထောက်ပြသို့မဟုတ်အခြားအခန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Elite ကိုသဟဇာတ Hub ချိတ်ဆက်ပြီး, အနီအောက်ရောင်ခြည်မှတဆင့်သင့်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှအလှည့်ပေါက်ကွဲမှုများအတွက်သောထွက်ပညတ်တို့ကို, Wi-Fi သို့မဟုတ်ဘလူးတုသ်, ကိုမဆိုလိုအပ်ပါသည်.
The Hub က၎င်း၏ထုတ်လွှင့်စွမ်းရည်၏ခြေရာကိုချဲ့ထွင်ဖို့နောက်ကျောသို့ပလပ်နိုင်ပါတယ်နှစ်ခု IR blaster နှင့်အတူကြွလာ, သင်တစ်ဦးဗီရိုထဲမှာ hidden ပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဝန်ရှိပါကအသုံးဝင်သောအရာဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာသင်မည်သည့်အထူးသဖြင့်ဦးတည်ချက်ကိုအတွက်ဝေးလံခေါင်သီထောက်ပြရန်မလိုပါနဲ့တုန့်ပြန်အစာရှောင်သည်ကိုဆိုလိုသည် – ယခင်မှာ IR-based Logitech သဟဇာတဝေးလံခေါင်ဖျားထက်အများကြီးပိုမြန်.
အဆိုပါ Elite အမြင်ကျယ်နှစ်ခု functions တွေခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်: "လှုပ်ရှားမှု", အရာတစျခုဝေးလံခေါင်ဖျားသို့အတူတကွ devices နဲ့လုပ်ရပ်ပေါင်းစပ်; နှင့်စက်ကိရိယာများ, သောသူတို့၏တိုင်း function ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသင်၏ devices များအားလုံးထွက် lists.
အဆိုပါစမတ်ဖုန်း app ကိုလည်းအပြည့်အဝဝေးလံခေါင်သီအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်, volume ကိုခလုတ်တီဗီရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ဥပမာအားဖြင့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဥပမာအားဖြင့်အဘို့အ touchscreen ကအပေါ် "စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကို TV" ကိုနှိပ်ပါ, ထိုသို့တီဗီကိုကြည့်ဘို့လိုအပျတဲ့အရာခပ်သိမ်းအပေါ်ဖွင့်နှင့်တစ်ဦးစတင်ရုပ်သံလိုင်းသတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်. ငါ့အဘို့သော amp င်, ဂြိုဟ်တုသေတ္တာနှင့်တီဗွီ, အားလုံးအလိုအလျှောက်လက်ျာရဲ့ input နှင့် mode ကိုသတ်မှတ်ထား. ငါထို့နောက် amp နှင့်အတူအသံအတိုးအကျယ်ကိုပြောင်းလဲစိတ်ကြိုက်ဝေးလံခေါင်သီရ, ဂြိုဟ်တုသေတ္တာနှင့်အတူလိုင်းများအကူးအပြောင်းနှင့်တီဗီနှင့်အတူရုပ်ပုံ-In-ရုပ်ပုံကိုသက်ဝင်.
ငါမှလဲလှယ်လိုလျှင် အမေဇုံမီးသတ်တီဗီ, ငါ button ကိုထိမှန်ကြောင့် amp အပေါ် input ကို switches, ဂြိုဟ်တု box ကိုပယ် switches များနှင့်ကျွန်တော်ချွတ်နေ.
သငျသညျစာရေးတံပြုနေပြီးတာနဲ့, press the dedicated off button on the very top of the remote and it takes care of the rest.
The remote can controlavariety of internet of things devices, including the Nest smart thermostat and any device connected to the SmartThings system. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဥပမာအားဖြင့်, anything configured with Samsung’s SmartThings Hub can be controlled using the Harmony. You can pause, ကစား, skip tracks and adjust the volume of Sonos speakers. You can view the state of your presence, temperature, activity or water sensors.
The remote lasts aroundaweek of evening use per charge, or can just be left in its dock overnight. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အကြီးမားဆုံးပြဿနာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်: it is very expensive foraremote. Logitech’s Harmony Hub is where the real potential lies, with its ability to control pretty much anything and become an interface for IoT devices. Controlling your home entertainment is tedious with onlyasmartphone, သို့သော်, as it’s neverasingle button push to get the job done and always takes longer than you’d like.
အကောင်းအဆိုး: controls practically everything, no line-of-sight required, easy to set up with the app, can also use the app to control, IoT integration, ergonomic
Cons: စျေးကြီး, relatively easy to accidentally pressabutton on the touchscreen when picking up the remote, setup cannot be done directly on the remote
The back of the hub hasamicroUSB socket for power, two sockets for IR blasters andareset button should everything go wrong. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
App များ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အရာဖြင့်အင်တာနက်, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, က Playstation 4, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, Smart homes, Smart meters, စမတ်ဖုန်း, Sony က, နည်းပညာ, ရုပ်မြင်သံကြား, TV streaming
← အားလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစေပါဒါကကိုးအများစုဟာစိတ်ပျက်စရာအမှား Huawei ကမိတ်ဆက် P9 နှင့် P9 Plus အားစမတ်ဖုန်းကို iPhone နဲ့ Galaxy အပေါ်ကိုယူမှ →